IPrati, enye yezindawo zikanokusho kunazo zonke eRoma | Ukuhamba kwe-Absolut
maruuzen | | amaRom
amaRom kungumuzi omncane ongahlolwa ngezinyawo. Ukuhambahamba ezindaweni zayo eziningi kunconywa kakhulu ngosuku olubalele, ngakho-ke kulolu hambo awukwazi ukuphuthelwa ubuhle nobuhle umakhelwane I-Prati.
IPrati yindawo okuyiwa kuyo ngezindlela zayo, izakhiwo zayo ezinhle kanye nayo intelezi yaseYurophu. Inobuntu obuningi, icishe ibukeke njengeParis, ngakho ake sibone namuhla ukuthi yini esingayenza lapha.
2 Yini ongayivakashela ePrati
Kuyinto Ikota lamashumi amabili nambili eRoma futhi ijazi layo lezikhali lifaka iMausoleum yaseHadrian, enye yezindawo zayo eziyizifanekiselo (yize empeleni ingekaBorgo). Kepha uyini umlando wale ndawo enhle yaseRoma?
Kubukeka sengathi ngezikhathi zoMbuso WaseRoma la mazwe ayehlalwa izivini nezihlahlanaNgakho-ke, yabizwa ngokuthi uHorti Domitii, futhi kwakungeyenkosikazi kaDomitian. Kamuva lashintsha igama, laba nguPrata Neronis, kwathi phakathi neNkathi Ephakathi labizwa ngokuthi iPrata Sancti Petri noma izinkambu zaseSan Pedro.
Le ndawo yahlala iluhlaza kwaze kwaba cishe ngasekupheleni kwekhulu le-XNUMX, phakathi kwezihlahla, amaxhaphozi kanye namadlelo amadlelo ngoba kwakusekhona amapulazi lapho, ikakhulukazi emithambekeni yeMonte Mario. Kepha e 1873 owayengumnikazi wendawo enkulu ngaleso sikhathi, uXavier de Mérode, wasayina inkontileka nomasipala yokuyiqala yakha isifunda esisha. Kwadlula iminyaka eyishumi kwaze kwaba yilapho izakhiwo zokuqala zibona ukukhanya.
Kodwa-ke, indawo yangakubo yahlala inganakiwe isikhathi eside njengoba yayingekho ingqalasizinda ekahle futhi kwakubonakala sengathi iyodwa. Eqinisweni, uMèrode uqobo wakhokha ephaketheni lakhe ngemisebenzi yebhuloho lensimbi ukuvula imizila yezokuxhumana. Kwakusekuqaleni kwekhulu lama-XNUMX kuphela lapho leli dolobha laqala ukuxazulula izinkinga zasemadolobheni esifundeni. Kanjani ? Ngokuyinhloko lapha kwakhiwa amahhovisi okuphatha oMbuso omusha wase-Italy.
Ukuhlelwa kwemigwaqo kwenziwa ngokukhethekile: ini akukho noyedwa wabo owayengabonakala iSonto LaseSan Pedro. Ngaleso sikhathi, ubudlelwano phakathi kweVatican nohulumeni omusha babungebona obuhle kakhulu, ngakho-ke akukho mgwaqo noma isikwele esizungeze lapha esinamagama opapa noma osanta.
Imisebenzi emisha yayihlanganisa ukugcwaliswa komhlaba, ukuze ungahlushwa yizikhukhula zoMfula iTiber, kodwa kwakungelula futhi ngenxa yokuqina komhlaba. Kepha, noma kunjalo, izakhiwo ezintsha zaqala ukuvela njengamakhowe, konke phakathi nengxenye yokuqala yekhulu lama-XNUMX kanye nemigwaqo efanayo efanayo.
Imigwaqo emikhulu yase Prati yilezi Nge-Cola di Rienzo, lo Nge-Cicerone, lo UMarcantonio Colonna neLepanto. Yonke le migwaqo iyinhliziyo kaPrati. Ngasenyakatho umngcele womakhelwane iDella Vittoria, empumalanga nendawo yakwaFlaminio, eningizimu noPonte nasentshonalanga neTriininfale.
Yini ongayivakashela ePrati
Njengoba uhamba imigwaqo kanye nezikwele eziqanjwe ngobuntu boMbuso WaseRoma uzobona izakhiwo ezithile ezinhle njenge inkantolo nabahle I-Adriano Theatre. Le theatre yavulwa ngo-1898, namuhla isebenza njenge-cinema futhi iseLa Piazza Cavour.
Ngokwengxenye yayo, isigodlo sezobulungiswa sakhiwa phakathi kuka-1888 no-1910 futhi sithathwa njengesakhiwo esikhulu, esinye sezakhiwo ezibaluleke kakhulu ngemuva kokumenyezelwa kweRoma njengenhloko-dolobha yoMbuso wase-Italy. Ngenxa yesimo sendawo, nomswakama omningi kangaka, bekufanele ifakwe izisekelo zikakhonkolo eziqinile ezaqhubeka kwaze kwaba ngama-70s wekhulu lama-XNUMX lapho kufanele iphinde iqiniswe. Ikona isitayela se-baroque nokuvuselelaUngamamitha ayi-170 ngamamitha ayi-155 futhi wonke yi-travertine limestone.
I-Prati yindawo ethule, okunye okuhle uma ungafuni ukuphithizela. Ixhumeke kahle kulo lonke idolobha, kepha isahlala futhi izolile. Ngisho yindawo ephephe kakhulu, ngoba yize ingazalwanga ngesibusiso seVatican, indawo yokuhlala kaPapa isondele kakhulu.
Ngakho-ke into engcono kakhulu umuntu angayenza kuPrati hamba, ulahleke ezitaladini zawo. Ungaqala kusuka eVatican uqobo, uvakashele iSt. Peter's Basilica noma i-Vatican Museums bese uqala ukuhamba ngezinyawo. Ngakho-ke, uzophinde ungene ku Isonto Lenhliziyo Engcwele Yokuhlushwa, eyaziwa nangokuthi iMilan Cathedral encane ngoba inombukiso omuhle we-neo-Gothic.
Ngaphakathi lapha kusebenza i- Imnyuziyamu Yemiphefumulo Yesihlanzo, kumnyama kancane, nezithombe zabangasekho ... Isonto lakhiwa ngo-1917. Ngaphakathi kukhona nohlaka oluhle.
El Inkundla Yezemidlalo i-Olympic Futhi kusePrati. Yavulwa ngo-1953 yize umlando wayo usukela ngeminyaka yawo-20 njengoba kwakukhona inkundla encane yama-fascist kuleyo ndawo. Lapha kwaqhutshwa umcimbi wokuvula nokuvala wama-Olimpiki Asehlobo wango-1960 futhi yalungiswa ngokuphelele i-1990 Fifa Cup futhi, ngo-2008.
Umgwaqo othengwa kakhulu ePrati yiVia Cola Di Riezo. Uzobona izintambo ze- izitolo zezingubo, izitolo ezincane, nezindawo zokudlela. Banamanani angcono kunesikhungo esinomlando, ngakho-ke kuyindlela enhle yokonga imali. Abahlali babo? Omabhalane, omabhalane, abantu abahola kahle ngoba ingenye yezindawo ezingcono kakhulu zezomnotho eRoma. Qaphela, ungacabangi ukuthi yindawo edume kakhulu enokunyakaza okuningi, cha, empeleni kungumakhelwane ongaphandle kwesifunda sabavakashi futhi kwesinye isikhathi ngisho namaRoma awafiki lapha.
Yebo, isondelene kakhulu neSt. Peter's Basilica neVatican, kepha abavakashi abavame ukuyivakashela njalo. Futhi labo abafikayo bavele bazihambele nge-Via Cola di Renzo, egxila ezitolo. Kepha uma ufuna okuningi, kufanele uqhubekele phambili kancane. Isibonelo, i-bequeath Indawo yaseViale Giulio Cesare, eyodwa indawo enezinhlanga eziningi lapho abantu abavela kuwo wonke umhlaba bahlala ndawonye.
Ngokusobala, kunama-Arabhu namaNdiya amaningi lapha, nezitolo zawo ezihambelanayo. Futhi uma uhlela ukudabula i-Italy kunesitolo sezincwadi esihle, iTouring Club, esinakho konke kwabahambi, kufaka phakathi imihlahlandlela namamephu. Isifanekiso seDea Roma siyasamukela ku- IRisorgimento Bridge. Yenziwe ngumbazi wasePoland u-Igor Motoraj futhi unobuso obudabukisayo nobunothando.
Futhi ukuhamba uzobona abaningi Izakhiwo zesitayela se-Umbertino, isitayela esijwayelekile sekwedlule ikhulu le-XNUMX lase-Italy nabaningi Ama-villas wesitayela se-Art-Nouveau. Kukhona futhi rationalist isitayela izakhiwo, kusukela esikhathini sikaMussolini, nezinye ze isitayela se-rococo. Ngokusobala kukhona nezinye izakhiwo zesimanjemanje, njengesakhiwo seRAI, zonke zenziwe ngengilazi nezibuko, noma owake waba ngumasipala, isakhiwo esinezithukuthezi sango-1973 manje esinamawindi agqamile kakhulu. Lowo onezithombe ozozithatha!
Eminye imikhakha kaPrati yile UDelle Vittorie, isifunda esahlelwa ngo-1919 etholakala kakhulu ku- ezungeze iPiazza Mazzini futhi ebonakala ngezindlu ezakhiwe ngesikhathi sama-fascist, ezinamagceke avulekile ajwayelekile. Kuzo zonke lezi zakhiwo esiziqambe amagama kuze kube manje, ungaphuthelwa yimininingwane emihle impela eminyango, emawindini nasemabhalkhoni.
Uma uthanda ukugibela ibhayisikili ePrati kunezindlela ezithile zebhayisikili kusuka eViale Angelico kuye eCastel Giubileo, indawo engaphezulu kakhulu kwasedolobheni elisenyakatho neRoma. Kuwukuhamba okuhle okugudla osebeni lomfula futhi kulahleke emasimini avulekile noma kungaba yini emaphandleni aseRoma. Enye indlela yebhayisikili iqala ngasikhathi sinye kodwa iya kude, ePiazza Cavour.
Ingabe zikhona izikhala eziluhlaza ePrati? Hhayi-ke, awekho amapaki afanele akhumbula ukwenzeka kwawo kwangaphambilini kanye nezivini. Kukhona osebeni lomfula, indlela yebhayisikili eceleni kwakhe lapho abantu bavame ukuhamba noma ukugijima hhayi okuningi okunye. Mhlawumbe ibha ethile ecashile ngasogwini noma esikebheni.
IPrati kungenzeka kungabi yindawo ethandwa kakhulu eRoma kepha ake ngikutshele lokho uma uya ngo-Agasti yisikhathi esihle kakhulu kukho konke. Empeleni, noma ngasiphi isikhathi phakathi kukaJulayi 1 noSepthemba 7 yisikhathi esihle, ngoba isimo sezulu sihle, kunabantu emigwaqweni abahambahamba, ungavakashela iMnyuziyamu yaseCastel San't Angelo ebusuku ehlobo, udabule phezulu- vuka indlela yokuhamba yeBorgo Passetto, lapho uPapa abalekela khona eVatican waya enqabeni, futhi wababaza idome yeSt. Peter's Basilica esendleleni. Precious.
Ukwenza lolu hambo kufanele ukhokhe kodwa ngethikithi elifanayo ungavakashela le nqaba namahholo ayo amahle namapati noma ukhuphukele ku-terrace futhi ujabulele ukubukwa kwayo okuhle kwe-panoramic.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » IPrati, enye yezindawo zikanokusho kakhulu eRoma